र,क्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नेपाली से,ना आ,बस्यक परे युद्ध गर्न तयारी अबस्थामा भनेपछि . (पूर हेर्नुहोस) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/र,क्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नेपाली से,ना आ,बस्यक परे युद्ध गर्न तयारी अबस्थामा भनेपछि . (पूर हेर्नुहोस)
। नेपाल र भारतबीच सिमा विवादले दुई देशको सम्बन्धमै समस्या आइरहेको छ । वार्ताको वातावरण बन्न सकेको छैन । कोभिड १९ का कारण तत्काल वार्ताको सम्भावना न्युन देखिएको छ ।
नेपाल भारतबीच सम्बन्धमा समस्या आइरहँदा भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी निकटस्थ सामरिक मामलाका जानकारहरुले नेपालको वर्तमान सरकारप्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन् । पत्रपत्रिकाले पनि त्यस्तै विश्लेषणहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
भारतको मध्यदक्षिणपंक्ति धारको अनलाइन टीएफआइ पोष्टले नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाले आवश्यक परे युद्ध पनि गर्ने भनेको भन्दै भारतसँगको पछिल्लो सिमा विवादलाई जोडेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको विषय जोडेर नेपालको कम्युनिस्ट सत्ताले जर्बजस्ती भारतको सुरक्षा र सामरिक चासोलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेको छ । ‘नेपालले सिमा विवाद झिकेर भारतको सुरक्षा स्वार्थलाई खलल पुर्याएको, छ,’ टीएफआइ पोष्टले लेखेको छ, ‘कम्युनिस्ट सत्ताले जर्बजस्ती भारतको सुरक्षा र सामरिक चासोलाई बेवास्ता गरेको छ।’
यो टिप्पणी भारतको सत्तापक्षसँग नजिक मानिएका टिप्पणीकार तथा पूर्व जनरल गगन दीप बक्सीले माओवादीलाई उचालेर नेपालमा हिन्दु राष्ट्र ध्वस्त गर्नुलाई भारतको सेल्फ गोल थियो भनी गरेको टिप्पणी गलत्तै आएको हो । जनरल बक्सीले एनडीटीभीसँगको मे महिनामा अन्तवार्ताका क्रममा कम्युनिस्टलाई विगतमा भारतको तत्कालिन सत्ताले भरणपोषण गरेको समेत भनेका थिए ।
यसैगरी, नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदुत राकेश सुदले दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिएको उल्लेख गर्दै पुर्नस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले द हिन्दु पत्रिकामा गत हप्ता लेख लेख्दै वाकपटुताको भौगोलिक राष्ट्रवादलाई रोकेर शान्त तरिकाको वार्तामा जोड दिएका छन् । दुई देशको विशेष सम्बन्धलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
विभिन्न टिप्पणी र घटनाक्रम केलाउँदा भारतमा एउटा पक्ष कम्युनिस्ट सरकारसँग वार्ता गरेर सम्बन्ध पुर्नस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्को पक्ष भने आक्रामक कुटनीतिमा जोड दिइरहेको छ । विशेषगरी कम्युनिस्ट सत्ताप्रति निकै कडा नीति लिनुपर्ने पक्षमा छ । भारतभित्र नेपालमा नयाँ नक्शा जारी गरेपछि नेपाल मामलामा चलिरहेको बहस नियाल्दा कठोर कुटनीति अबलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना बलियो भएर गएको छ ।
भ्वाइस अफ नेपाल किड्सको कोच घोषणा, को-को हुने छन् कोच ?
रुघा र जोरो त हो दुईचार दिन घरमै हेरौं भन्दै बसेका भुपालको अचानक मृत्यु
“सरकारले पर्खाल लगाउने हिम्मत गरोस्, म एक करोड सहयोग गर्छु”